उ राती फोन गरेर के कपडा लगाएकी छौ भन्थ्यो, म भने.., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
उ राती फोन गरेर के कपडा लगाएकी छौ भन्थ्यो, म भने..
एजेन्सी । बलिउड निर्देशक साजिद खानमाथि उनकी पूर्व असिस्टेन्ट डाइरेक्टर तथा अभिनेत्री सलोनी चोपडाले सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको आरोप लगाएकी छन् ।
सलोनीका अनुसार साजिदले उनीसँग विकिनी फोटो मागे, धेरैपटक गलत स्थानमा छोए र अश्लील कमेन्ट गरे ।
सलोनीपछि अन्य दुई महिलाले पनि साजिदमाथि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको आरोप लगाएका छन् ।
सलोनीले सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको कथा यसरी पोखेकी छन् :
कामका क्रममा मलाई पहिलो इन्टरभ्यूमै उसले सेक्ससँग सम्बन्धित प्रश्न गर्यो । काम दिएपछि उ मलाई राती २ बजे फोन गथ्र्यो । कामको कुनै कुरा हुँदैनथ्यो ।
उसले सोध्थ्यो, के कपडा लगाएकी छौ, के खायौ यस्तै यस्तै । उ मलाई आफ्नी गर्लफ्रेण्डबारे भद्दा कुरा बताउँथ्यो । म धेरै रात रुँदै रुँदै सुतेँ । मेरै अगाडी एक कस्ट्यूम ट्रायलका क्रममा एक युवतीलई स्कर्ट उठाउन भन्यो ।
एक राती त अति भयो । उसको फोनले म हैरान भइसकेकी थिएँ । उसले भन्यो अहिले नै मेरो घर आउ । मैले सोधेँ के तिमी मसँग सुत्न चाहन्छौ ? उसले भन्यो, ‘तिमि मुर्ख हौं । कास्टिंग काउचको मतलब एक पटक सुत्नु हुँदैन ।’
उसले कयौं निर्देशकको नाम लिँदै ती निर्देशकहरु महिनौसम्म अभिनेत्रीलाई राख्छन् भन्यो । मैले सोधेँ तिमी के चाहन्छौ ? उसले भन्यो, ‘जे मरो मर्जी, जे मन लाग्यो । हुन सक्छ म तिमिलाई छुन सक्छु र रेकर्ड गर्न सक्छु ।’
यदि म रखेल बनिन भने मलाई कुनै काम नदिइनेसमेत भन्यो । मैले भने भाडमा जाओस काम । दोस्रो दिन म समयमै अफिस पुगेँ । उसले फेरि मसँग उस्तै कुरा गर्यो । मेरो हात समातेर तान्यो । मैले विरोध गरेपछि उसले भन्यो ‘तिमी मलाई एक्साईट गर्दिनौ ।’ यो त्यहि बेला थियो जब मैले उसको अफिस छोडेँ ।
उसले यसपछि पनि मलाई फोनमा धम्की दियो । मेरो करिअर समाप्त पार्ने धम्की दियो । मैले यो विषयमा अरुसँग पनि भने तर, कतैबाट मेरो कुरा सुनिएन ।
साजिदमाथि एक सीनियर पत्रकारले पनि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको आरोप लगाएकी छन । उनले एक अन्तर्वार्ताका क्रमम साजिदले उनलाई किस गरेको बताएकी छन् ।
यस्तै अर्की मोडलले पनि आरोप लगाएकी छन् । उनले पनि कामका शिलशिलामा उसले आफूलाई एक्लै घर बोलाएर सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गरेको बताएकी छन् ।